IPixelmator Pro ngexabiso lesiqingatha sexesha elimiselweyo | Ndisuka mac
Ixesha elilungileyo lonyaka lokuthenga isoftware kuLwesihlanu omnyama, iintsuku ezimbalwa abanye abaphuhlisi bethatha ithuba lokunciphisa ixabiso lezicelo zabo kwaye ngenxa yoko basebenzise umzuzu xa wonke umntu unekhadi letyala esandleni sakhe.
Elinye ixesha elifanelekileyo lokuthenga isoftware ngeKrisimesi, elinye ixesha lenkcitho engalawulekiyo esetyenziswa luluntu ukutsala abathengi abatsha. Ngale ndlela, abafana abavela kwiPixelmator, basandula ukukhupha isipho sakho seKrisimesi ngokusika ixabiso lesicelo kwisiqingatha.
Ngesi saphulelo, Ixabiso lePixelmator Pro lihlala kwi-euro ezingama-21,99Isithembiso sokuba, ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, kuphela ngumphuhlisi owenza ngeli xesha, ke ukuba uhlala ufuna ukuzama esi sicelo kwaye ubeke bucala ukuba ayisiyiyo kwaphela inguqulelo esemthethweni yeFotohop, ngoku lelona xesha lililo.
Esi sibonelelo siya kufumaneka kwiiveki ezintathu ezizayo, ke unexesha elaneleyo lokucinga ngayo ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuba kufanelekile okanye hayi (impendulo ngu-ewe, ngaphandle kwamathandabuzo). Ukuba uyathandabuza, awuyidingi le sicelo.
Omnye wemisebenzi enomdla kakhulu yesi sicelo, kwaye ikwafumaneka kuhlobo lwe-iOS, ngumsebenzi weSigqibo seML Super, umsebenzi osebenzisa ukufunda komatshini ukwandisa isisombululo somfanekiso ngelixa ugcina ubukhali Ngawo onke amaxesha, njengemiboniso bhanyabhanya yolwaphulo-mthetho, apho iminyaka emininzi, banolu hlobo lwesoftware ... (Qaphela isigqebelo).
Ukuthatha ithuba ngesi sibonelelo, kuya kufuneka uye kwiVenkile ye-Mac okanye ucofe kwi icon yesicelo endiyishiya ekupheleni kweli nqaku, isicelo esisandula ukwenziwa Ukuhlaziywa ukuze kuhambisane neApple Silicon.
IPixelmator Pro€ 43,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » IPixelmator Pro ngexabiso lesiqingatha sexesha elimiselweyo